Sirni geggeessaa Jaal Galaanaa Imaanaa (1971-2020) raawwachaa jira. – Kichuu
HomeSirni geggeessaa Jaal Galaanaa Imaanaa (1971-2020) raawwachaa jira.
(Oromedia, 28 Sadaasa 2020) Sirni geggeessaa Jaal Galaanaa Imaanaa (1971-2020) raawwachaa jira.
Sirni Gaggeessaa Jaal Galaanaa Imaanaa Oromiyaa giddugala, aanaa Dirree Incinnii Ganda Arfijjoo Dagaa iddoo addaa maatii jedhamutti bifa hoo’aan gaggeeffamaa jira.
Sirna Boohichaa kana irratti hawaasti naannoo fi Qeerroon argamuun sirnicha addatti miidhagsaa fi seena qabeessa taasisaa jiru. Jaal Galaanaa Imaanaa magaalaa Amboo keessatti waraana Abiy Ahamd bobbaaseen gaafa sadaasa 21/2020 galgala qabamee gaafuma san barii jala ajjeefame.
Akka odeessi nu gahe ibsutti, reeffi Jaal Galaanaa gaafa sadaasa 23/2020 laga qarqaratti gatamee argame.
Galaanan Qeerroo Ambootii fi naannawa ishee ijaarudhaan falmii sirna TPLF fi PP irratti godhamaa turee fi jiru qindeessudhaan nama seenaa guddaa qabu ture.
Gama siyaasaatin miseensa ABO fi magaalaa Ambootti koree hoji raawwachiiftuu ABO ta’ee tajaajilaa tureera. Jaal galaanaan yeroo hedduu akka miseensa PP ta’uuf gaafatamee waan dideef ergamtoota Abiy Ahmadiin akka ajjeefamu irratti murtaa’e.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo ibsa baaseen akka hubachiisetti, goota ajjeesanii nagaan taa’uun hin jiru.
Qeerroon Bilisummaa Oromoo itti dabaluunis, “gantoonni Jaal Galaanaa ajjeechisanis ta’ee ajjeesan beekamanii jiru; yeroo gabaabaa keessatti gatii isaanii akka argatan shakkiin hin jiru,” jedheera.
Jaal Galaanaan bara 1971 Oromiyaa giddu galaa Aanaa Dirree Incinnii keessatti dhalate; ogeessa fi hayyuu dinagdee ture.
Jaala Galaanaan hawaasa naannoo birattyi kabajaa fi jaalala guddaa qaba ture. Bara jireenya isaas dantaa saba Oromoof otuu dhaababtuu, murnoota dantaa dhuunfaaf fiiganiin galaafatame.
Jaal Galaanaan abbaa ijoollee lamaa ture.
Galaanaa Imaanaa (1971-2020) fi Hacaaluu Hundeessaa (1986-2020)
Hacaaluun Waxabajjii 29 bara 2020 magaalaa Finfinnee keessatti ergamtoota nafxanyaa, kan mootummaan Abi Ahmad bobbaaseen ajjeefame.
Galaanaa Imaanaa Sadaasa 23 bara 2020 magaamaa Amboo keessatti humnoota tikaa mootummaa Abiy Ahmadiin ajjeefame.
Goototni lameen kun sabboontota Oromoo, qabsaa’ota mirga namoomaa fi falmattoota haqaa mirga ummata Oromoof otuu qabsaa’anii waerrgaman! Seenaa keessatti barayyuu yaadatmu!!
Injifannoon ni dhufa!!
Hacaaluu Hundeessaa ijoollee isaa lamaan irraa adda baasan;
Galaanaa Imaanaa ijoollee lamaan adda baasan.
Sirna kichoo qobaatti hambisu kanaaf, akkamiin garaa laafnee deeggarsa kennina?
Abadan hin ta’u, duunee banan malee, sirna akkanaa saba keenya irratti akka goobu hin goonu!!
#Amboo-dirree boohichaa; gadda ulfaataa ta’uun kee yeroon itti dhumatu fagoo miti!!
Harmee Jaal Galaanaa Imaanaa
Jabaadhu yaa harmee, tokkicha kee jabaa, Qabsoo sabaaf gumaachite! Mudhii kee jabeeffadhu!
Waaqayyoo jabina isaa siif haa kennu!!
PPn Amaaraa Caasaa Tikaa dhuunfatte.
Caasaan Tika Abiy kan Tamasgeen Xurunaan gaggeeffamu warra Oromoo of keesaa baasee, warra Amaaraan bakka buusaa jira. Haga yoonaattis, PPn Amaaraa aangoo jajabaa kan akka immigireeshinii, qajeelcha tikaa fi tika humna qilleensaa fi dinagdee dhuunfattee jirti.
Yeroo ammaa kanas caasaa Tikaa keessaa warra PP Oromoo ta’an hedduu hedhanii jiru; kaani immoo bakka gaafatamummaa qaban irraa kaasaa jiru.
PPn Oromoo otuu TPLF hin du’iin dursitee du”uf jirti.
Duulli akka ololaa hin salphatu!
Mootummaan Abiy maleenya rogsadeen adeema; Waraana TPLF irratti yeroo banes, waan sadii abdatee ka’e: Tika, Waraanaa fi Miidiyaa. Waraana amma itti jirus, mootummaa Ertiriyaa, Somaaliyaa fi Itoophiyaa waliin gaggeessaa jira. Haata’uutii, amma waanti hin yaadamne isa mudachaa jira. Dinagdeen biyyaa jaarmiyoota sadan kanaa fi duula dipiloomaasiif oolu harkaa dhumaa jira. Dhiheessiin dinagdee fi meesshaalee waraanaa akka oduu ta’uu dide. Ummanni Oromoo jabaatee mirga isaa harkatti galfachuu qaba. Mootummaa Ce’umsaa Oromiyaa hundeessuunis nagaa fi bilisummaa Oromoo fi lammiillee Oromiyaa mirkanneessuu qaba.
Nagaan sabooat hundaaf haa ta’u!!
Waraana ittaanuuf Qophaa’inaa dha!!
PPn amma caasaa tikaa fi waraanaa keessaa haxaawamaa jirti! Ishiin kan dandeessu Oromoo dha. Amma kan ishii nyaatu, kan TPLF caalu itti dhufaa jira.
Ummanni keenya mootummaa Ce’umsaa Oromiyaa dhaabbachuuf tarkaanfachuu qaba!!
Oromoon kan barabaraan gabrummaa keessati hafte midhaan ishee Adunyaa biratti dhagahamuu dhabe inni guddan sababa gantuu fii abbaa garaa baay’atuuf
Hacaaluu Hundeessaa new song2020 dafii kottu yaa WBO yaadakee na rarrasaa